टिभीमा देखिन माग्ने बुढाको यस्तो रोचक प्लान
केदार प्रसाद घिमिरे ‘माग्ने बुढा’को नामले दर्शकको मनमुटुमा बसेका छन् । माग्ने बुढा भन्ने बित्तिकै बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले उनको हुलीया झलझली सम्झन्छन् । हास्य टेलिश्रृंखलाको माध्यमबाट दर्शक समक्ष पुगिरहेका माग्ने अहिले ..
जुवामा ३६ लाख हारेपछि अमेरिका गएका थिए रमेश उप्रेती !
नायक रमेश उप्रेतीले आफु अमेरिका जानुको अहिलेसम्मकै ठूलो रहस्य खोलेका छन् । एक मिडियासँग अन्र्तवार्ता दिँदै नायक उप्रेतीले आफुले तास खेल्दा ३६ लाख रुपैयाँ हारेकोले अमेरिका भासिनु परेको रहस्य खोले ..
बर्थडे स्पेशलः बाल्यकालमा फर्कन चाहान्छन् नीर शाह
जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा उनलाई बाल्यकालको स्कुले जीवन फेरि जिउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हुन पनि बाल्यकाल यस्तो समय हो, जहाँ साना साना कुराहरुले मानिसलाई खुशी दिन्छ् । सन्तुष्टि दिन्छ ..
‘ह्यापी डेज’ मा दया र प्रियंकाको रोमान्स
यो बर्षको बहुप्रतिक्षित चलचित्र मध्यको एक हो मिलन चाम्सद्वारा निर्देशित “हेप्पी डेज” । चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन सक्किसकेको छ भने यति बेला चलचित्रको पोस्ट प्रोडक्सन र सम्पादनको काम भईरहेको छ । ..
यसरी मनाउँदैछन् माग्ने बुढाले यसपालीको दशैँ
नेपाली हाँस्यब्यङ्ग क्षेत्रमा निकै चर्चित र लोकप्रिय कलाकार हुन् केदार घिमिरे अर्थात माग्ने बुढा । ‘मेरी बास्सै’ मार्फत सबैको लोकप्रिय बनेका उनी नेपाली हाँस्यब्यङ्ग र कलाकारिता क्षेत्रमा अझै सक्रिय छन् ..
प्रियंका भन्छिन्, ‘आयुष्मान देख्ने बित्तिकै मन परेको होइन’
सात वर्षको उमेरमा बालकलाकार बनेकी प्रियंका कार्की अहिले चल्तीको नायिका हुन् । हास्य टेलिश्रृंखला ‘हिजो आजका कुरा’ कुरा हुँदै म्युजिक भिडियोमा देखिएकी प्रियंका मिस टिन २००५ कि विजेता हुन् । ..
‘प्रेमगीत’बाट स्टार बनेका नायक हुन् प्रदिप खड्का । ‘प्रेमगीत २’ को सफलता पछि उनको क्रेज थप बढेको छ । चक्लेटी अनुहारका प्रदिप सर्वाधीक मनपराईएका नायकमा पर्छन् । हालै एमबिए ग्रयाजुएट ..
महानायकको विवादबारे के भन्छन् शिव श्रेष्ठ ?
कुनै बेलाका सुपरस्टार नायक शिव श्रेष्ठले महानायक राजेश हमालको प्रशंसा गरेका छन् । फिल्म उद्योगको विकासका लागि राजेश हमालको ठुलो योगदान रहेको भन्दै नायक श्रेष्ठले प्रशंसा गरे। उनले भने–”आज राजेश ..